. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: November 2008
သူမကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အပျော်ရွှင်ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် .. သူမအပြုံးတစ်ခုတည်းနဲ့ပါ ..
သူမကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးကျယ်ဆုံးလူတစ်ယောက်လိုခံစားရဖူးတယ် .. သူ့စကားလေးတစ်ခွန်းတည်းနဲ့ပါ ..
သူမကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ လောကကြီးကို ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်မှုတွေ လွန်ကဲဘူးတယ် .. သူ့လက်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ အချိန်ကပါ ..
သူမကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အနုံချာ အစုတ်ပြတ်ဆုံးလူတစ်ယောက်လိုခံစားရဘူးတယ် .. သူ့မျက်နှာထားတစ်ခုတည်းနဲ့ပါပဲ ..
သူမကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကနေ ရေခိုးရေငွေ့အဖြစ် အမှုန်အမွှား အငွေ့အသက်အဖြစ် ပျောက်ကွယ်သွားချင်ခဲ့ဘူးတယ် .. သူ့အကြည့်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပါ ..
သူမကြောင့် ကျွန်တော့ဘ၀ အနာဂါတ်အတွက် ငိုကြွေးမြည်တမ်းခဲ့ဘူးတယ် .. သူ့တွဲလက်တွေ အေးစက်ခဲ့ချိန်တုန်းကပါ ..
သူမကြောင့်ပဲ ကျွန်တော့ဘ၀ ရည်ရွယ်ချက်မရှိ လမ်းပျောက်သွားခဲ့တယ် .. သူ့လမ်းခွဲစကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်ပါ ..
အချစ်ဆိုတာ ငါ့အတွက်တော့ ခံစားချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဖွဲ့တည်ထားတဲ့ သက်မဲ့အရာတစ်ခု .. သူမကတော့ ချစ်တတ်အောင် ခံစားတတ်အောင်သင်ပေးခဲ့တဲ့ သက်ရှိအရာတစ်ခု .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါချစ်တတ်ခဲ့ပြီ .. တနည်း လူပီသခဲ့ပြီ .. အချစ်ကို ချစ်နေဖို့ပဲ ငါသင်ယူခဲ့ပြီ ..
ရေးသားသူ moekhar at 11/29/2008 01:53:00 AM 1 comment:
သီချင်းပြိုင်တူငြီးဖူးတယ် ... ။
ဟက်ဟက်ပက်ပက်ပြိုင်တူရီမောဖူးတယ် ... ။
အားလုံးသဘောတူကျူရှင်တွေပြေးဖူးတယ် ... ။
ပုလင်းတူဗူးဆို့စာတွေခိုးချဘူးတယ် ... ။
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား တောင်ပေါ်တက်ဖူးဘူးတယ် ... ။
မခွဲချင်ခွဲချင်ခွဲခဲ့ဘူးတယ် ... ။
ငါနင်တို့ကို သိပ်လွမ်းတယ် ... ။
ရေးသားသူ moekhar at 11/29/2008 01:26:00 AM2comments:
ကျွန်မတို့ရဲ့ သတ္တကမ္ဘာလောကကြီးမှလူအမျိုးမျိုး တည်ရှိနေထိုင်ကြတဲ့အတွက် "လူအမျိုးမျိုးစိတ်အထွေထွေ"ဆို
တဲ့ စကားအတိုင်း လူတိုင်း လူတိုင်းရဲ့ ခံယူချက်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်း ၊ရည်မှန်းချက် ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်မှု၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှု ၊ စိတ်နေသဘောထား၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ၊ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်း မွေးဖွားကြီးပြင်းပုံ စသည် အားလုံးက အစစ အရာရာကွာခြားနေကြတယ် .....။
ဒီလိုစိတ်တွေ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတာကြောင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်နွယ်ပတ်သက်ကြတဲ့နေရာမှာ သဘောတရား နားလည်လွဲမှားမှုတွေ အထင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပြီး မဖြစ်သင့်တဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ အမုန်းတရားတွေ အာဃာတတွေ အမြင်မကြည်လင်မှုတွေနဲ့ နောက်ဆုံး လမ်းခွဲကြရတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေထိ ဖြစ်နေကြတယ် ….။
ကျွန်မတို့တွေဟာ အသက်ရှင်နေသ၍ လူအမျိုးမျိုးနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရဦးမှာပါ .....။
ကျွန်မတို့အသက်ရှင်နေသ၍ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကင်းကွာပြီးနေဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး .. ဒါကြောင့်မို့ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်သည်ဖြစ်စေ မုန်းသည်ဖြစ်စေ မနှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ အသက်ရှင်နေသ၍ ပြောဆိုဆက်ဆံနေရအုံးမှာပါပဲ ....။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာချင်း အတူတူ အဆင်ပြေပြေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ တွေ့ကြ ဆုံကြ လမ်းခွဲကြတာဟာ အကောင်းဆုံးပါ….. လူတွေက နောက်ဆုံးမှာတော့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ဘယ်လောက်မုန်းမုန်း ဘယ်လောက်ပဲမခွဲခွာချင်ပါဘူးပြောပြော တနေ့တော့ မဖြစ်မနေ ကွဲကွာခြင်းနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ကြမှာပါ .....။
မဖြစ်မနေကွဲကွာခြင်းဆိုတာကတော့ သေခြင်းတရားပါပဲ.. သူလည်းသေလူ ကိုယ်လည်းသေလူဆိုတာကို သိနေကြ ပြီပဲ .. ဘာအတွက်နဲ့ ကိုယ်က မာနတွေကြီး အမုန်းတရားတွေထားပြီး သူများတကာကို မခေါ်နိုင်မပြောနိုင်တွေ ဖြစ်နေရဦးမှာလဲ .. ဒီလူတစ်ယောက်ကိုမုန်းတဲ့အတွက်ကိုယ့်မှာ ဘာအကျိုးတရားရှိသွားပါသလဲ .. ကိုယ့်မှာ သူ့ကို မုန်းပြီးဒေါသထွက်ရလို့ အချိန်ကုန် ၊ လူပင်ပန်း၊ စိတ်ပင်ပန်း၊ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ တာဝန်တွေလစ်ဟင်းရုံကလွဲပြီး ကိုယ့်အတွက်ဘာအကျိုးတရားရရှိသွားပါသလဲ.. ကိုယ်ပဲ မအေးချမ်းနိုင် ပူလောင်နေမှပေါ့ .. သူကဘာဖြစ်မှာလဲ .. ကိုယ်သူ့ကို မုန်းနေတယ်ဆိုတာ သူကသိတောင်သိပါ့မလား .....။
ဒီတော့ သူ့ဘက်ကိုမစဉ်းစားပဲ ကိုယ့်အကျိုးဘက်ကနေပဲ စဉ်းစားကြည့်ရအောင် .. ကိုယ်လုပ်နေတာတွေဟာ သူ့ကို ကိုယ့်ရဲအဖိုးတန်အချိန်တွေပေးပြီး မုန်းနေရသလိုပါပဲ .. သူအတွက် ကိုယ်ရဲ့အဖိုးတန်အချိန်တွေပေးရလောက်အောင်တန်ပါသလား .. အကျိုးလည်းမရှိတဲ့အပြင် ကိုယ်အတွက်ပါထိခိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ အပင်ပန်းမခံပဲ သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ကြည့်လိုက်ပါလား .. ကိုယ်အတွက်နဲနဲတော့အေးချမ်းသွားမှာအမှန်ပါ
အကယ်၍ ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တောင် သူ့ကို ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ ရှိတယ်လို့သဘောမထားပဲ ဥပက္ခာသဘောလေးထားကြည့်ပါ .. နဲနဲတော့အေးချမ်းသွားမှာပါအမှန်ပါ .....။
အားလုံးဟာ ခွဲခွာခြင်းမှာ အဆုံးသတ်မယ်ဆိုတာ သေချာနေပါတယ် .. ကွဲကွာကြရမယ့် အတူတူ ရှိနေတဲ့ အချိန်ကလေးအတွင်းမှာ ဘာလို့ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အမုန်းတွေ အာဃာတတွေ အတ္တတွေ မာနတွေနဲ့ အချင်းချင်းပူလောင်အောင် တိုက်ခိုက်တာတွေ လုပ်နေကြတာလဲ .. တကယ်တမ်း အဲဒါဟာ အဓိပ္ပါယ်ရှိရဲ့လား .....။
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာ အရင်ဆုံးတိုက်ခိုက်မိကြတာကတော့ စကားလုံးတွေနဲ့ပါပဲ .. လူကိုမုန်းစေတာလည်းကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခွန်းပါပဲ .. ချစ်စေတာလည်း အဲဒီစကားတစ်ခွန်းပါပဲ .. ဒီပါးစပ်ပေါက်လေးတစ်ခုနဲ့ပဲ လူတွေ ကောင်းစားသွားတာရှိသလို .. အမုန်းတွေပွား ရန်ငြိုးတွေဖွဲ့ရင်း သတ်ကြဖြတ်ကြတဲ့ အထိဖြစ်တာတွေလည်းကြားဖူးသိဖူးကြမှာပါ .....။
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းဟာ ဒီလူတစ်ယောက်ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ်မှာ သိသာနိုင်ပါတယ် .. ကိုယ်ပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ကိုယ့်အပေါ်ကို အထင်ကြီးလေးစားခံရတတ်သလို .. ကိုယ့်စကားကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကို အထင်သေးစိတ်ဝင်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် .. (သူများအထင်ကြီးခံချင်တာနဲ့ အထင်ကြီးစေတဲ့စကားတွေကို လုပ်ပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူး .. လုပ်ပြောတယ်ဆိုကတည်းကလည်း အစစ်အမှန်မဟုတ်လို့ ကိုယ်ပြောတဲ့စကားက ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ် အဆင့်အတန်းကို သိသာစေတာကြောင့် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပြောဖို့ ကို ဆိုလိုတာပါ..)
ငါကတော့ စကားကိုဒီလိုပဲပြောတတ်တယ် .. ငါ့စိတ်ထားကတော့ကောင်းပါတယ် ..ဆိုတဲ့ လူဖြောင့် စိတ်တို ဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်း ကြားဖူးမှာပါ.....။
ချိုချိုသာသာပြောလည်း ဒီစကားပါပဲ .. ဆဲဆိုအော်ဟစ်ပြောလည်း ဒီစကားပါပဲ .. စကားကတော့ ဒီစကားပါ ဒါပေမယ့် အပြောခံရသူရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ နာခံချင်စိတ် လက်ခံချင်စိတ်ကွာခြားသွားနိုင်ပါတယ် လူ့အကျင့်ဆိုတာ ပြုပြင်ယူရပါတယ် .. ဒီလိုပြုပြင်ဖို့ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ် .. သိပြီးရင်လည်း သိရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး .. ဘယ်အကျင့်တွေကမကောင်းဘူးလဲ ဘယ်အကျင့်တွေကကောင်းလဲဆိုတာ ခွဲခြားတတ်ရပါမယ် .. ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ခွဲခြားသိပြီးရုံနဲ့လည်း အသုံးမ၀င်သေးပါဘူး .. ကောင်းတာကိုယူပြီး မကောင်းတာကို စွန့်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါအုံးမယ် ..
မကောင်းတာကိုသိရက်နဲ့ ငါကအကျင့်ပါနေပြီ .. မွေးကတည်းကဒီလိုပဲပြောဆိုနေထိုင်လာတာ .. ဆိုပြီးထားလိုက်ရင် ကျွန်မတို့ဟာ ဘယ်တော့မှ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့လူ၊ ပါးစပ်စည်းကမ်းရှိတဲ့လူ
ကျွန်မရဲ့ ကြီးကြီးပြောတဲ့စကားလေးပါ .. အဆင့်အတန်းဆိုတာ ခွဲစရာမလိုပါဘူးတဲ့ .. သူ့အလိုလိုကွဲပြီးသားပါတဲ့ .....။
ကျွန်မငယ်စဉ်ကသိပ်မသိပေမယ့် အခု အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ နားလည်လာနေပါပြီ .. အားလုံးကိုနားလည်နေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး .. ကျွန်မအရွယ်နဲ့ကျွန်မ သိသင့်သလောက်သိနေတာပါလို့ ဆိုလိုချင်တာပါ .. အခုဆိုရင် အလုပ်ထဲမှာရော အပြင်မှာပါရှိတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေအားလုံး
ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မကောင်းသည်ဖြစ်စေ တည့်အောင်ပေါင်းဖို့ပဲ စဉ်းစားတတ်နေပါပြီ .. သူကမကောင်းလို့
ငါကပြန်မကောင်းနိုင်ဘူးဆိုတားမျိုးမဖြစ်အောင် ကျွန်မကြိုးစားတယ် .. တစ်ခုတော့ကွာတာပေါ့ .. စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူကို စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး ကျွန်မပေါင်းတယ် .. စိတ်ထားမကောင်းသူဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေအောင်နေတယ် .. အလိုက်အထိုက်ပေါင်းသင်းတယ် .....။
နောက်တစ်ခု ကျွန်မယုံကြည်လိုက်တာက စေတနာရောင်ပြန်ဟပ်တယ်ဆိုတာပါပဲ .. ကိုယ့်ဘက်ကသာ စေတနာနဲ့အစစ်အမှန်ပေးရင် တောင်းစရာမလိုဘူး တကယ်ကို ပြန်လာပါတယ် .. မယုံရင် စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါလား .. ကိုယ့်စေတနာမှန်ရင် တကယ်အောင်မြင်လာမှာပါ.....။
တစ်ခုတော့ရှိတယ် .. တစ်ချို့ပေးတယ် ပြန်မလာဘူး ပြောကြတယ် .. ဒါက အချိန်မရောက်သေးလို့ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ် .. အချိန်တန်တော့ပြန်လာမှာပါ .. အဲဒါကိုလည်း အချိန်ဘယ်လောက်အတွင်းဆိုပြီး
တိုင်းတာသတ်မှတ်ထားလို့မရပါဘူး .. ကိုယ့်စေတနာပေါ်ပဲ မူတည်မယ် ထင်ပါတယ် .. ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ပေးကတည်းက ပြန်လာမလားဆိုပြီး မျှော်လင့်ချက် မထားထားတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ .. မျှော်လင့်နေရတဲ့အတွက် ပျက်စီးမှာ ဆုံးရှုံးမှာကို စိုးရိမ်ပူပန်ရပါတယ် .. မအေးချမ်းနိုင်ပါဘူး ..
ဒါကြောင့် ကိုယ်ပေးမယ်ဆုံးဖြတ်ပြီးရင် အပြတ်ပေးလိုက်ပါ .. မမျှော်လင့်ပါနဲ့ .. ကိုယ်မမျှော်လင့်ပေမယ့်အချိန်တန်ရင်တော့ ပြန်လာမှာ သေချာပါတယ် .. တကယ်တော့ ဒါ လောက ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ လောကနိယာမလေးတစ်ခုပါပဲ .....။
မေတ္တာစိတ်နဲ့ကြည့်တတ်ရင် အရာရာ အေးချမ်းပါတယ် .. စိတ်ထားကောင်းတဲ့လူ .. စိတ်ထားလှတဲ့လူဟာ မျက်နှာလေးပါ လှနေတတ်တယ်လို့ ကြားဖူးမှာပါ .. စိတ်ကလေးဟာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတဲ့အတွက် မျက်နှာလေးဟာလည်း မလှဘူးဆိုရင်တောင် တည်တည်ကြည်ကြည် ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် .. အဲလိုအလှမျိုးမှာ ပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ အတ္တ မာနတွေ မပါပါဘူး .. ပကတိ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလွန်းပါတယ် .....။
ကျွန်မတို့ နေ့စဉ် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လှအောင် ပြုပြင်နေထိုင်ကြတယ် .. ပြင်လွန်းတဲ့အတွက် အပေါ်ယံကတော့လှနေပါပြီ ..ကဲ.အတွင်းစိတ်ကရော .. အပြင်မှာ မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း တကယ်လှရဲ့လား .. ကိုယ်မြင်တွေ့နေတဲ့အရာတွေကိုရော တကယ်လှတယ်လို့မြင်ရဲ့လား .. အရာရာကို ကိုယ်က မေတ္တာစိတ်နဲ့ ကြည့်တတ်ရင် လောကကြီးတခုလုံးဟာ လှနေမှာပါ .. အရာရာတိုင်းရဲ့ အလှတရားဟာ ကြည့်တဲ့လူရဲ့အကောင်းမြင်မေတ္တာစိတ်ဆိုတဲ့ မျက်စိနဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ် .. ကျွန်မတို့တွေအားလုံးဟာ အဆုံးသတ်မှာ ခွဲခွာရမယ့် လူတွေချည်းပါပဲ .. အခုတွေ့နေတုန်း အချိန်ခဏလေးမှာ ဘာလို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင်မနေနိုင်ရမှာလဲရှင် .. နေရောမနေသင့်ဘူးလား .....။
ကျွန်မတို့တွေ အားလုံး လူတိုင်းအပေါ် မေတ္တာစိတ်ကလေးထားပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစား ရှင်သန်သွားကြရအောင်လေ ..
www.mysuboo.com ရဲ့ မဂ္ဂဇင်းမှာ ပါဘူးတဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ ..
ရေးသားသူ moekhar at 11/28/2008 02:41:00 PM2comments:
ရေးသားသူ moekhar at 11/27/2008 03:18:00 PM 1 comment:
ခုချိန်မှာ ရည်ရွယ်ချက်တွေပြည့်ဝဖို့အတွက် စင်ကာပူဆိုတဲ့ ကျွန်းပေါ်ကို ရောက်ရှိနေခဲ့တာ (၇) လ ကျော် (၈) လ ထဲကို ရောက်နေခဲ့ပြီ .. အိမ်မက်တွေ လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒတွေကို ချိုးနှိမ်ထားရတယ် .. မျှော်လင့်ချက်တွေ အရောင်တောက်ဖို့ ရင်ခုန်သံတွေကိုဖုံးဖိထားခဲ့တယ် ..
လူရယ်လိုဖြစ်လာကတည်းက တစ်ခုလိုချင်ရင် တစ်ခုကိုတော့ပေးဆပ်ရစမြဲပဲ ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုက်တန်ပါတယ်လေ ..
အခုအရှုံးတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုရင်တောင် ငါဟာ အရှုံးထဲက သင်ခန်းစာယူတတ်ရမယ် .. ဒါမှ အရှုံးပေါ် အရှုံးထပ်မဆင့်မှာ .. တတ်နိုင်သလောက် အမြတ်ထွက်အောင်လုပ်ရမယ် ..
ဘ၀ဆိုတာတိုက်ပွဲပဲတဲ့ .. လူတိုင်းလဲ ရင်ဆိုင်နေရတယ် .. ငါဘာလို့ရင်မဆိုင်နိုင်ရမလဲ .. ကြုံတွေ့ရသမျှ အပြုံးနဲ့ ကျော်ဖြတ်နိုင်ရမယ် .. ခုအခက်အခဲဟာ တစ်ချိန်ကျရင် ရယ်မောစရာဟာသဖြစ်နေမှာပါ ..
ရေးသားသူ moekhar at 11/20/2008 11:51:00 AM2comments: